Zvemagetsi software kune yako yemahara Linux distro | Linux Vakapindwa muropa
Kana iwe uri zvemagetsi kana zvemagetsi hobbyist, zvirokwazvo iwe uchave uchifarira kuziva mamwe emhando dzakanakisa zvirongwa zvaunazvo zveaya mabasa muLinux. Vazhinji vavo vane chokwadi chekuti watove kuvaziva, asi pamwe kwete vese. Chokwadi ndechekuti muGNU / Linux pane huwandu hukuru hwezvishandiso izvi, uye nemhando yepamusoro muzviitiko zvakawanda.
Kubva pane simulators, kupedzisa mamiriro eEDA, kuburikidza nevamwe mapurogiramu dhizaini maPCB, nezvimwe. Heino runyorwa rwakanaka rweakanakisa ...
KiCad: Chokwadi iwe unotozviziva, ine simba uye hushamwari pcb dhizaini software iri pakati pezvakanakisa. Yakakurumbira yakavhurwa sosi EDA yekutangisa dhizaini yako, fungidzira iwo mu3D, nezvimwe.
EAGLE- Imwe pcb dhizaini software ine zvemazuva ano maficha uye neyekuvandudza se Autodesk kumashure kwayo. Imwe nzira ine hungwaru uye ine simba, ine yakanaka graphical nharaunda, rutsigiro rwechirongwa kuronga, SPICE simulation, kuiswa uye kuenzanisa maturusi, nezvimwe.
GEDA: ndeimwe yemahara uye yakavhurwa sosi chirongwa chemagetsi. Iyo inokutendera iwe kuti uite inobudirira kwazvo kufambiswa kwemabasa, kugadzira zvigadzirwa zvemagetsi zvemarudzi ese uye nehurongwa hwekubata, prototyping, dhizaini, kugadzira uye zvimwe zvakawanda.
Upperter: Iyo iri padandemutande, asi iri mhinduro yeEDA yakanangana nekureruka uye nyore kwekushandisa. Inogona kushandiswa kubva pawebhusaiti, uye iwe unogona kugadzira, kuona zvigadzirwa, kugovana madhiragi wedunhu, uye nezvimwe. Ichi chirongwa chinogadzira maGerber mafaera, uye akashandura mamodheru ane yakasarudzika sarudzo yezvinhu zvekusarudza kubva.
fritzing: hapana sumo inodiwa, inoshandiswa zvakanyanya kune basa reArduino. Ichi chakavhurika sosi chishandiso chinokutendera iwe kuti ugadzire ako wega wedunhu madhirama, kunyangwe mu3D. Iine raibhurari hombe ine mhando dzese dze microcontroller mabhodhi, pamwe nekuwanda kwemidziyo yemagetsi yekuisa.
NyoreEDA: imwe nharaunda yakapusa yeLinux neBSD. Mhinduro yekugadzira, kutevedzera uye kugovana dhizaini kana marongero ePBBB. Izvo zvakare zvinokutendera iwe kuti ugadzire maGerber mafaera, uye mamwe marudzi.
MaharaPCB: ndeimwe yakasimba kwazvo uye yakazara EDA nharaunda, kunze kwekunge iri yemahara uye yakavhurika sosi, pamwe neyemahara. Iyo ine intuitive GUI, yakapusa, yazvino, uye iine makuru maficha evanogadzira emagetsi.
PathWave Yepamberi Dhizaini Sisitimu (ADS): Ichi chirongwa hachisi chakakurumbira senge chekare, asi zvakakosha kuziva. Iri rine simba bhizinesi giredhi EDA naro rekugadzira yako maPCB. Yakanyatso shanda uye iine repertoire hombe yezvishandiso zvekushanda nayo, dhizaini dhizaini, yakawanda-fomati rutsigiro, kupinza uye kutumira kunze, ine HSPICE, SPICE, Gerber, Specter manhamba, Excellon, ODB ++.
chishamiso: yakavhurika sosi software yeVLSI marongero. Chishandiso chikuru chekugadzira nyore maseketi akabatanidzwa. Inoshanda paLinux neBSD, yakajeka, yakavhurika-sosi, uye inonyatso chengetwa.
Pcb-rnd- Chimwe chinhu chiri nyore uye chakasimba kunyorera compact pcb dhizaini. Iyo inozivikanwa kwazvo nehunyanzvi nevadzidzi, pamwe nehuremu. Inoenderana nenhamba yakakura yemastros neBSD, pamwe neakawanda maturusi ataurwa pano.
KTechlab- Iyo yazvino kwazvo uye inoratidzira-yakapfuma nharaunda yekusimudzira yePIC dhizaini uye simulation. Zvakare zvinoshandiswa zvakanyanya nevadzidzi. Iyo interface inoenderana neQt maraibhurari.
QElectroTech- Iyi zvakare yakavakirwa paQt, uye iri mhinduro yeEDA yekugadzira maseketi emagetsi nemadhirama. Yakanyanya hunyanzvi uye yakapusa yekutenda kune yayo inonzwisisika GUI. Inosanganisira kuwanda kwezvinhu zvine zviratidzo zvakaenzana.
Xilinx Vivid: multiplatform uye nyanzvi EDA nharaunda yevanogadzira vanoshanda pachip dhizaini uye synthesis, ine HDL, pamwe neFPGAs, ARM machipisi, ma microcontroller, IP cores, nezvimwe.
Bvisa Universal Circuit Simulator: sekuratidzwa kwazvinoita zita iri chishandiso chakazvigadzirira chishandiso chemidziyo yemagetsi. Izvo zviri nyore kushandisa, iine graphical nharaunda, nekukurumidza, uye inokwanisa kuenzanisa ako magadzirirwo, kugadzira iyo yakawanda magirafu uye ruzivo ruzivo.
smart sim- Imwe ficha-yakapfuma EDA yedhijitari logic wedunhu dhizaini uye simulation. Dhizaini inokutendera kuti utumire kune dzakasiyana mafomati ekuburitsa faira. Uye mahara uye yakavhurika ...
Electric: imwe EDA (Magetsi Dhizaini Yekushandisa) software yanga ichishandiswa dhizaini yakawanda kwazvo machipisi. Inoshandira maIC uye maPCB.
gnucap: Iri zvakare chishandiso cheGNU senge iri pamusoro. Mune ino kesi iyo yakavhenganiswa yedunhu chiratidzo chiratidzo. Iyo yemahara, yakavhurika, uye isingaremi.
Falstad Dunhu Emulator: ndeimwe inozivikanwa yewebhu-based emulator, kune chero chikuva. Iyo inokutendera iwe kuteedzera yakanaka sarudzo yemagetsi zvikamu, zvinosanganisira AC maseketi, diode, MOSFETs, Op-AMps, mafirita, oscillators, uye zvimwe.
checker: Ndine chokwadi chekuti zita rayo rinonzwika serakajairika kwauri, uye inozivikanwa simulator yeiyo Verilog programming mutauro. Pamusoro pezvo, iko kuita kwepamusoro, sosi yakavhurika, uye inoshandiswa zvakanyanya nevadzidzi uye nharaunda yakavhurika sosi. Makambani akaita seIntel, AMD kana Oracle akashandisa iyi EDA.
XCircuit- Chimwe chinoyambuka-chikuva EDA chishandiso chekudhirowa nekudhinda yemhando yepamusoro wedunhu madhirama. Iyo inoshandiswa kune manetwork kana schematic kubatwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Zvemagetsi software yeLinux yako distro
BricsCAD InPower Electrical Injiniya Zvishandiso, Newton Raphson Simba Kuyerera, Pfupi Circuit Kuongorora, Arc Flash Chiitiko Energy Kuverenga.
Pindura kune ieilabs